Anotyisa Warp: Nyowani Indie Munhu Wekutanga Shooter Vhidhiyo Game | Linux Vakapindwa muropa
Anotyisa Warp: Nyowani Indie Munhu Wekutanga Shooter Vhidhiyo Game
Kana iwe uchida indie mitambo yemavhidhiyo uye zvakare wekutanga munhu shooter mitambo yemavhidhiyo, saka Zvinotyisa Warp uchada. Kuburitswa kweiyi FPS zita ne retro uye indie 3D inobata yakaziviswa. Mutambo wakafuridzirwa nemazita makuru pachiitiko senge Quake, Unreal, Doom, uye Chasm: Iyo Rift.
Iwe unozogona kutamba kuburikidza neanojairika zviitiko, ine yakamanikana mapaseji, zvinouraya zvombo, uye mijenya yekuita sezvaunotarisana nevavengi vako uye kuyedza kurarama. Uye ndizvozvo kuti chidzidzo icho chakaipisisa Warp chakagadzira, Mvere Softworks'
Pindai hunhu hwemutambo wevhidhiyo Zvinotyisa Warp, kana usati wakwana zvakakwana netrailer video, une:
Inesarudzo furemu- Unogona kudzidza zvese nezve zviitiko zvinosiririsa zvinofadza nyaya iyi kana kusvetuka wakananga muchiito.
Classic kurwa: Ine system ine zvombo zvakafanana neiya zvaunoona mune mimwe mitambo, kunyangwe iwe uchigona zvakare kugadzirisa imwe nhumbi.
Vavengi: Idzo mhuka dzakasiyana dzinogona kumhanya, kushambira, kusvetuka, kuchera, nezvimwe, kuti zviome kwauri.
Kuongorora kwenyika: mepu yako inogona kuongororwa mukutsvaga nzvimbo dzakavanzika, uye kuwana zvimwe zvakaitwa.
Scalable mifananidzo: injini yemitambo yemagetsi inoshandisa matekinoroji mazhinji azvino, asi inogona zvakare kugadzirirwa kune zvine hunyanzvi Hardware. Iyo yakavakirwa pane yayo yega injini injini inonzi Akapusa Enginey yakavakwa zvakafanana kune yakakurumbira Quake uye kuve muchinjikwa-chikuva.
Sevha mitambo: inogona kuponeswa chero kupi, haufanirwe kusvika zvimwe zvibodzwa mumutambo kuti ugone kuponesa semamwe mitambo. Rinewo otomatiki anoponesa.
Kunetsa: hauzove nemiseve yekuzviratidza, kana mamwe marudzi ezviratidzo, haugone kumutsiridza iwo hupenyu hwehupenyu, nezvimwe. Naizvozvo, zvakaomarara uye uchafanirwa kuratidza hunyanzvi hwako.
Mamwe mashoko - chiutsi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Anotyisa Warp: Nyowani Indie Munhu Wekutanga Shooter Vhidhiyo Game
Semazuva ese iwe unokanganwa kutaura kuti haisi muchiSpanish kubva kuSpain, saka haina basa.
Startpage uye Ecosia, maviri mainjini ekutsvaga anofanirwa kukuita kuti ukanganwe nezveGoogle neBing
Gorilla rakura chaizvo asi risinganakidze. Kutora kwangu Ubuntu 20.10